Weerar lagu qaaday xalay Deegaanka Xawaadley – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka laga helayo deegaanka Xawaadley oo hoostaga Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe ayaan waxa ay sheegayan in xalay halkaasi kooxo hubeysan ay weerar ku qaadeen deegaanka.
Weerarka ayaa la sheegay in uu ka dhacay Xarumo ku yaalla Xawaadley iyo goobo ganacsi oo bartilmaameed u ahaa kooxihii weerar soo qaatay,waxana weerar xigay dagaal muddo socday oo dhaxmaray ciidamada dowlada iyo ragiii hubeysnaa.
Goobaha la weeraray ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ciidan, maamulka degaanka iyo mas’uuliyiin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe,isla markaana waxaa weerarkaasi lagu dhaawacay sida la sheegay Taliyaha amniga deegaanka Xawaadley.
Sidoo kale waxaa weerar lagu gubay gaari Cabdi Bile ah oo uu lahaa Taliye ku-xigeenka Saldhigga Booliska degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.